26 / 12 / 2020 /i fibromyalgia, rheumatism /av olimalayo
Abantu abaningi abane-fibromyalgia nabo bayathinteka yi-plantar fasciitis. Kulesi sihloko, sibhekisisa ukuxhumana phakathi kwe-fibromyalgia ne-plantar fasciitis.
I-plantar fascia ipuleti le-tendon ngaphansi konyawo. Uma ukungasebenzi kahle, ukonakala noma ukuvuvukala kwenzeka kulokhu, kubizwa ngokuthi yi-plantar fasciitis. Lesi yisimo esingadala izinhlungu ngaphansi kwamathe onyawo nangaphambi kwesithende. Lapha, phakathi kokunye, sizodlula ekutheni izicubu ezixhumene nobuhlungu (i-fascia) ezixhumene ngqo zingaxhunyaniswa kanjani ngqo ne-fibromyalgia.
Ithiphu enhle: Ngaphansi kwendatshana ungabuka ividiyo enezivivinyo zokuzivivinya ngokumelene ne-plantar fasciitis. Siphinde futhi sinikeze ngamathiphu ngezinyathelo zokuzikala (njenge amasokisi wokucindezela we-plantar fasciitis)
Kuyini uPlantar Fascitis?
I-Fascia Ebucayi Ebucayi Ne-Fibromyalgia
Ubudlelwano phakathi kweFibromyalgia noPlantar Fascitis
Izinyathelo ezenzelwe u-Plantar Fascitis
Ukuzivocavoca nokuQeqesha ngokumelene nePlantar Fascitis (kufaka ne-VIDEO)
Esithombeni sokubuka konke ngenhla (Umthombo: Mayo Foundation) siyabona ukuthi i-plantar fascia isuka kanjani ngaphambili futhi inamathele ethanjeni lesithende. I-Plantar fasciitis, noma i-plantar fasciosis, yenzeka lapho sithola indlela yokwenza izicubu zokulimala ekunamathiselwe phambi kwethambo lesithende. Lesi simo singathinta noma ngubani wanoma yimuphi ubudala, kepha sithambekele ekwenzakaleni ikakhulukazi kulabo abacindezela izinyawo zabo kakhulu.
Umsebenzi omkhulu we-plantar fascia ukunciphisa umthwalo wokuthinteka lapho sihamba. Uma lokhu kulimele, futhi kungathathwa zinyathelo ezisebenzayo, ungahamba ne-plantar fasciitis isikhathi eside kakhulu. Abanye baze bahambe emibuthanweni engapheli lapho umonakalo uphinde uvele kaninginingi. Amanye amacala wesikhathi eside angaqhubeka iminyaka eyi-1-2. Kungakho kubaluleke kakhulu ngokungenelela, kufaka phakathi ukuziqeqesha (ukululeka namandla okuvivinya umzimba njengoba kukhonjisiwe kuvidiyo engezansi) nezinyathelo zokuzikala - ezifana la masokisi we-plantar fasciitis compression okwandisa ukujikeleza kwegazi kuya endaweni elimele (isixhumanisi sivuleka ewindini elisha).
Ucwaningo luye lwabonisa ukwanda kobuhlungu bezinhlungu ezicubu zomzimba (fascia) kulabo abathinteka yi-fibromyalgia (1). Kunobufakazi, njengoba kushiwo ngenhla, bokuthi kukhona ukuhlangana phakathi kokungasebenzi kahle kwezicubu ezixhuma emisipha nokwanda kobuhlungu kulabo abane-fibromyalgia. Lokhu-ke kungasiza ekuchazeni izehlakalo ezikhuphukile ze:
I-medial Epicondylitis (I-Golf Elbow)
I-lateral Epicondylitis (indololwane yethenisi)
Ngakho-ke kungabangelwa inqubo yokuphulukisa engasebenzi kahle kulabo abane-fibromyalgia - okuholela ekwandeni kwezehlakalo nobunzima ekulweni kokubili ukulimala nokuvuvukala kwamathenda nase-fascia. Ngenxa yalokho, lokhu kungaholela ebangeni elide lalezo zimo uma umuntu ethinteka yi-fibromyalgia.
Isixhumanisi phakathi kwePlantar Fascitis neFibromyalgia
Singabheka izizathu ezintathu eziyinhloko zokusolwa okwandayo kwe-plantar fasciitis phakathi kwalabo abane-fibromyalgia:
I-Allodynia ingomunye wabo izinhlungu eziyisikhombisa ezaziwayo ku-fibromyalgia. Lokhu kusho ukuthi izimpawu zokuthinta nobumnene, obekungafanele neze zilimaze kakhulu, zihunyushwa kabi ebuchosheni - futhi ngaleyo ndlela zizizwe zimbi kakhulu kunalokho obekufanele ngabe ziyikho.
Ukuphulukiswa Okuncishisiwe ku-Connective Tissue
Ucwaningo esikhulume ngalo phambilini lubheke ukuthi omaka bamakhemikhali ezinto eziphilayo bakhombise kanjani izinqubo zokulungisa ezingasebenzi kahle kuzicubu zomzimba nezicubu ezixhumene nalabo abane-fibromyalgia. Uma ukuphulukiswa kuhamba kancane, kuzodingeka nobunzima obuncane ngaphambi kokuthola ukulimala okulimazayo endaweni ethintekile.
Izenzo Zokuvuvukala Ezandisiwe
Ucwaningo lwangaphambilini lukhombisile ukuthi i-fibromyalgia iyi kuxhunyaniswe nokusabela okunamandla kokuvuvukala emzimbeni. I-Fibromyalgia ukuxilongwa kwe-rheumatic tissue. I-Plantar fasciitis, okusho ukuvuvukala kwepuleti le-tendon ngaphansi konyawo, ngakho-ke kubonakala sengathi kuxhunyaniswe ngqo kukho kokubili ukunciphisa ukuphulukiswa nokuphendula kokuvuvukala. Ngokuqondile ngenxa yalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ngokwanda kokujikeleza kwegazi ezinyaweni nasemilenzeni kulabo abathintekayo yi-rheumatism yezicubu ezithambile. Izingubo zokucindezela, njenge amasokisi wokucindezela we-plantar fasciitis, ngakho-ke ingadlala indima ebalulekile ekulweni ne-plantar fasciitis kuleli qembu lesiguli.
Sishilo ukuthi ukukhula okwandayo kokuvuvukala nokwelashwa okunciphisiwe kungaba yingxenye yokuxhumana phakathi kwe-plantar fasciitis ne-fibromyalgia. Le nhlanganisela yezici ezingezinhle inegalelo ekwakhiweni kwezicubu zomonakalo eziningi ekunamathelweni kwethenda onqenqemeni lwangaphambili lwethambo lesithende. Ngeshwa, futhi kunjalo ukuthi unyawo kuphela alusona indawo enesimo esihle segazi esivela ngaphambili. Yilokhu kusakazwa okuletha izakhi zomzimba, njenge-elastin ne-collagen, endaweni yokulungiswa nokunakekelwa.
Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe- Amasokisi Okucindezelwa KwePlantar Fascitt (okunikeza ingcindezi ezindaweni ezifanele ezinyaweni)
Ukwelashwa kwePlantar Fascitis
Kubalulekile ngokuhlolwa okuphelele nokwelashwa kwe-fasciitis yesitshalo. Isibonelo, ukuqina kweqakala (ukuhamba okuncishisiwe kokuhlangana kweqakala) kungaba nomthelela ekukhuphukeni komthwalo kumishini yezinyawo - futhi ngaleyo ndlela kube yinto elayisha ngokweqile ipuleti yethenda yonyawo. Esimweni esinjalo, kuzobaluleka futhi ngokuhlanganiswa okuhlangene kwejoyinti neqakala ukufaka isandla ekulayisheni okulungile. Ezingeni legolide ekwelapheni i-plantar fasciitis sithola yew Shockwave Ukwelashwa. Le yindlela yokwelashwa enomphumela omuhle obhalwe phansi ngokumelene ne-fasciitis yesitshalo. Ukwelashwa kuvame ukuhlanganiswa nokuhlanganiswa ngokuhlanganyela kwezinqulu nasemhlane uma kungatholakali ukungasebenzi kahle nakwezi. Ezinye izinyathelo zingafaka umsebenzi wemisipha ohlose ngqo imisipha yethole.
Ngabe ukhathazwe yiPlantar Fascitis Ehlala Isikhathi Eside?
Ukuzivocavoca nokuQeqesha ngokumelene nePlantar Fascitis
Uhlelo lokuqeqesha ngokumelene ne-fasciitis ye-plantar luhlose ukuqinisa kuphela unyawo neqakala, ngenkathi lolulwa nokwenza ipuleti le-tendon liguquguquke kakhudlwana. Ukuzivocavoca ekhaya ngokwezifiso kungabhalwa udokotela wakho wezitho zomzimba, udokotela wezinhlungu noma abanye ochwepheshe bezempilo abafanele.
Kuvidiyo engezansi ungabona uhlelo lokuzivocavoca olunokuzivocavoca okungu-6 ngokulwa ne-plantar fasciitis. Zizame kancane - futhi uzivumelanise nezimo ngokuya ngomlando wakho wezokwelapha nefomu lansuku zonke. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuthatha isikhathi ukuhlela kabusha izicubu ezilimele ngaphansi konyawo - nokuthi kufanele uzilungiselele ukwenza lezi zivivinyo okungenani ama-3-4 ngesonto ezinyangeni ezimbalwa ukubona intuthuko. Kuyisidina, kepha kunjalo ngendlela eyi-plantar fasciitis. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi esigabeni sokuphawula ngezansi kwendatshana noma esiteshini sethu se-Youtube uma unemibuzo ozizwa singakusiza ngayo.
IVIDEO: Ukuzivocavoca okuyi-6 ngokumelene noPlatinar Fascitt
1.ULiptan et al. I-Fascia: Isixhumanisi esilahlekile ekuqondeni kwethu isifo se-fibromyalgia. UJ Bodyw Mov Ther. 2010 Jan; 14 (1): 3-12. i-doi: 10.1016 / j.jbmt.2009.08.003.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/Vondt-i-foten.jpg 500 750 olimalayo https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png olimalayo2020-12-26 21:49:332020-12-26 22:03:49I-Fibromyalgia ne-Plantar Fascitis
Konke Okufanele Ukwazi Nge-Sacroilitis [Umhlahlandlela Omkhulu] I-Fibromyalgia ne-Leg Cramps